Ithegi: itekhnoloji yentengiso | Martech Zone
Ithegi: itekhnoloji yentengiso
NgoLwesine, Julayi 30, 2020 NgoLwesine, Julayi 30, 2020 Douglas Karr
Inkqubo yentengiso ekwi-Intanethi ineenkampani, iinkqubo zetekhnoloji, kunye neenkqubo zobuchwephesha ezintsonkothileyo zonke zisebenza kunye ukuhambisa iintengiso kubasebenzisi be-Intanethi kwi-Intanethi. Intengiso ekwi-Intanethi izise uninzi lweempawu ezintle. Kwenye, ibonelelwe ngabenzi bemxholo ngomthombo wengeniso ukuze babenako ukuhambisa umxholo wabo simahla kubasebenzisi be-Intanethi. Kuyavunyelwa kwakhona ukuba amashishini amajelo eendaba kunye netekhnoloji amatsha ukuba akhule kwaye aphumelele. Nangona kunjalo, ngelixa intengiso ekwi-Intanethi